Panda Bear: n'etiti ịhụnanya na ụjọ | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | China, Oge ntụrụndụ, Asia njem
Mba kachasị ukwuu n'ụwa, China, nwere ụmụ amaala ala a na-ahụta na ọ bụ chi: Panda Bear, anụ na-eri anụ na-esite na mba ọwụwa anyanwụ a. A na-eleta ha na zoo, ọ bụghị naanị obodo, kama n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Panda Bear na-ewu ewu nke ukwuu na ọ bụ akara ngosi ego nke ụwa na-echebe anụmanụ, WWF.
A maara nke ọma na anụmanụ a nọ ugbu a n'ihe egwu nke ikpochapụ. Ọtụtụ oge ọ nwere ike ịdị ka anụmanụ dị jụụ na nke na-enweghị ntụpọ, mana oge ndị ọzọ ọ nwere ike bụrụ otu n'ime ihe ndị kachasị dị egwu na ụwa anyị.
1 Panda na-agba
2 Onye iro nke panda
3 Ime pandas ọgụ?
4 Ozi banyere panda na-agba Gu Gu
5 Panda bu Gu Gu
Panda bea bụ anụ mara mma ma buru ibu, nke doro anya na ọ dịka anụmanụ buru ibu, mana ọ karịrị naanị ọdịdị. Panda bea nwere agụụ na-enweghị atụ maka achara, ọ na-erikarị ọkara ụbọchị: ngụkọta nke iri na abụọ na-eri nri. Ọ na-erikarị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilogram 13 nke achara iji gboo mkpa nri ya kwa ụbọchị ma na-ewepụ akụ ndị ahụ na ọkpụkpụ aka ya, nke na-agbatị ma na-arụ ọrụ dị ka isi mkpịsị aka. Mgbe ụfọdụ pandas nwekwara ike iri nnụnụ ma ọ bụ òké.
Pandas ọhịa na-ebikarị n'ime ime, ugwu ugwu nke etiti China. Nke a bụ n'ihi na n'akụkụ ndị a enwere oke ohia achara kachasị elu ma ha nwere osisi a na ụzọ ọhụụ na mmiri, ihe ha hụrụ n'anya. Pandas nwere ike ịrị ugwu na ịrị elu na-eri nri mgbe osisi dị ụkọ, dịka ọkọchị. Ha na-erikarị nri, nọrọ jụụ ma gbatịa ụkwụ azụ ha. Ọ bụ ezie na ha dị ka ndị na-anọkarị otu ebe, ha abụghị ebe ha bụ ọkacha mara ndị na-arị elu osisi na ndị na-egwu mmiri nke ọma.
Pandas na-agba ha na-anọrọ onwe ha ma nwee isi ísì nke ukwuu, karịsịa na ụmụ nwoke iji zere izute ndị ọzọ ma si otú ahụ nwee ike ịchọta ụmụ nwanyị ma nwee ike ịlụ n'oge opupu ihe ubi.
Mgbe ụmụ nwanyị tụụrụ ime, afọ ime ha na-adịru ọnwa ise ha na-amụkwa otu nwa ma ọ bụ abụọ, ọ bụ ezie na ha enweghị ike ilekọta mmadụ abụọ n’otu mgbe. Babiesmụaka Panda kpuru ìsì ma pere mpe mgbe a mụrụ ha. Babiesmụaka Panda enweghị ike iri ari ruo ọnwa atọ, agbanyeghị na amụrụ ha na-acha ọcha ma na-etolite agba ojii na oji.
Taa enwere pandas 1000 n'ọhịa, ihe dị ka 100 bi na zoo. Ihe niile amaara taa gbasara pandas bu ihe diri ndi no na nga ebe obu na o siri ike iru pandas ohia. Agbanyeghị, ebe kachasị mma maka anụ ọhịa panda, dịka anụmanụ ọ bụla, bụ ebe obibi ya ọ bụghị n’ogige ụmụ anụmanụ.
Onye iro nke panda
Ha anaghị enwekarị ọtụtụ ndị iro ebe ọ bụ na enweghị ndị na-eri anụ chọrọ iri ha. Ọbụlagodi na onye iro ya bu mmadu. Enwere ndị chọrọ ịchụ nta pandas maka akpụkpọ ha na agba ha pụrụ iche. Mbibi nke mmadụ na-etinye ebe obibi ha dị ka ihe egwu ma nke a bụ ihe iyi egwu kachasị njọ ma mee ka ha nwụọ.
Onye iro ọzọ nwere ike ịbụ agụ owuru. Ọ bụ anụ nwere ike igbu ụmụaka panda mgbe nne ha dọpụrụ uche ha. Ma mgbe nne nọ n’ebe ahụ, agụ owuru agaghị anwa anwa ịwakpo ya n’ihi na ọ ma na ọ ga-adị mfe imeri ya.
Ime pandas ọgụ?
Mwakpo Panda dị obere ka ha na-ezere ndị mmadụ na ebe ha bi. Panda ọhịa anaghị eso mmadụ enwe mmekọrịta, ọ bụ ezie panda na-ewe iwe n'ihi na a kpasuru ya iwe ma ọ bụ n'ihi na ụmụ ya nwere nsogbu nwere ike ịwakpo onwe ha.
N’ogige ụmụ anụmanụ, anụ ọhịa panda na-atọ ụtọ ma n’agbanyeghi na ọ dị obere, ha nwere ike ịwakpo ma ọ bụrụ na ha echee na ha wakporo ha ma ọ bụ na-enye ha nsogbu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha dị ka anụ ọhịa bea, ha kwesịrị ịkwanyere ugwu dịka anụ ọhịa ọ bụla ọzọ.
Ozi banyere panda na-agba Gu Gu
N'ọtụtụ oge akụkọ banyere Pandas Bears dị ịtụnanya. Ọ na-esiri ọtụtụ ndị ike igwu ala na anụmanụ a yiri ka ọ dịghị emerụ ahụ siri ike. Otu akụkọ dị otú ahụ bụ ihe mere Zhang Jiao dị afọ 28. Nwa ya nwoke dowara egwuri egwu ya ebe Panda Bear aha ya bụ Gu Gu nọ, na mgbe ọ na-agbalị iweghachi ya, ọ tara ahụhụ siri ike na ya.
Maazị Jiao tara ahụhụ ka anụmanụ ahụ tara ụkwụ ya, mana nke kacha ju anya bụ na o nweghị ihe o mere iji gbochie mmebi ahụ. Ọfọn n'ihi na dị ka ọtụtụ ebe ọwụwa anyanwụ, nwere nkwanye ùgwù dị ukwuu maka Panda Bear, onye ọ na-ewere dị ka akụ mba. O mesiri ha obi ike na ha di nma ma na obi di ya uto na ha na achara achara n’okpuru osisi. Lee omume ka ọ bụrụ ihe ijuanya karịa!
Ihe kachasị dị ịtụnanya bụ na ọ bụrụ na ụlọ zoo a chọọ, ọ nwere ike ịgba akwụkwọ megide Zhang Jiao maka ịbanye mpaghara amachiri maka ndị mmadụ, dịka mpaghara Panda Bear.
Panda bu Gu Gu
Ọ dị mkpa ikwu na Bear Gu Gu abịaworị na akụkọ ntolite nke ịwakpo ụmụ mmadụ. Otu afọ tupu ihe a na-egbu mgbu na Zhang, anụmanụ a na-ekwu okwu wakporo nwatakịrị nke naanị afọ iri na ise n'ihi na ọ rịgoro na njedebe nke ebe anụmanụ ahụ nọ. Afọ ole na ole gara aga, ọ wakporo onye mba ọzọ mmanya na-egbu n'ihi na ọ makụrụ ya.
Kpachapụ anya ụmụ anụmanụ bu ihe ebumpụta ụwa ha adịghịkwa awakpo maka obi ụtọ mana n'ihi na ụjọ na-atụ ha na ọ bụ nanị ụdị nchebe ha. Agbanyeghị, maka ndị niile chere na Panda Bear bụ ụdị anụmanụ jupụtara, onye dị jụụ ma dịkwa ụtọ, ha ahụlarị na ọ ka mma ịmụrụ anya ma sọpụrụ ntuziaka nke zoos.
You mara na ihe dịka $ 100 ị nwere ike ịnwe Panda Bear na nso ya. Ee, a na-ekwu na a zụlitere ya nke ọma ma zụọ ya na ebe nchekwa ha dị ezigbo enyi. Ma ọ ka mma mgbe ụfọdụ hapụ ha nwayọ ma nweere onwe ha ghara ịta ahụhụ otu n'ime mwakpo ya, nke nwere ike ibibi mbibi n'oge ndụ ya niile, ma ọ bụ nke ka njọ, ọnwụ.
A dọọla gị aka na ntị, gaa leta ha mana biko jiri oke nlezianya na mmetụta ịhụnanya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » Panda Bear: n'etiti ịhụnanya na ụjọ
M na nne nne m dijo
Akwa ọkwa! Agụọla m nwa nwanne m nwoke 8 n'ihi na anyị nwere obi abụọ ma panda ahụ ga-awakpo ndị mmadụ.
Ekele maka mbipụta zuru ezu dị otu a, ọ nyeere anyị aka ịmụ ọtụtụ ihe gbasara pandas! Daalụ! 🙂
Zaghachi soro nne nnem
Ezigbo ederede, eziokwu dị oke mma, achọkwara m ịma ma pandas nwere ike bụrụ ndị iro, ọ bụ ezie na o doro anya na ha nwere ike ịbụ ndị ezinụlọ ursidae, bea nke karịrị 200 kilo nwere ike imerụ gị ahụ nke ukwuu site na otu ịda ụkwụ ya. eziokwu, site na China bụ mba nwere mpaghara kachasị ukwuu nke mmadụ nwere mana ọ bụghị nke kachasị ga-abụ Russia
Hotels nwere atụmatụ dị iche iche maka ụbọchị Valentine